Kliniki yekuyedzwa kwepiritsi vhezheni yeCCVID-19 vaccine inotanga muIsrael
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » Kliniki yekuyedzwa kwepiritsi vhezheni yeCCVID-19 vaccine inotanga muIsrael
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Israel Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Mishonga yose yazvino yeCOVID-19 inorapwa kuburikidza nemajekiseni kamwe chete kana maviri.
Kliniki kutongwa pane makumi maviri nemana vasina kuvharirwa vanozvipira kweiyo imwe-dhizaini capsule vhezheni yemushonga yakatenderwa.
Iyo capsule inogona kushandiswa senge inosimudzira kupokana neinonyanya kutapukira Delta musiyano.
Piritsi rakanga rayedza munguruve uye mhuka dzakange dzagadzira masoja ekudzivirira chirwere mushure mekupihwa.
Jerusarema-based Oramed Mishonga yakazivisa kuti yakagamuchira mvumo kubva kuTel Aviv Sourasky Medical Center kuti itange kiriniki kutongwa kune makumi maviri nemana vasina kuzvidzivirira kune imwe-dose chipisi vhezheni yemushonga weECVID-24.
Oramed yakaziviswa munaKurume kuti yainge yaongorora piritsi rayo pane nguruve uye mhuka dzakange dzagadzira masoja ekudzivirira mushure mekupihwa.
Iyo piritsi vhezheni yechirwere checoronavirus inogona kunge iri "shanduko yemutambo" munyika dzine yakaderera jekiseni rekudzivirira, akadaro mushambadzi.
Iyo kambani inonyanya kugadzira yemumuromo shanduro yemishonga iyo inowanzo kupihwa kuburikidza nejekiseni, irikuitawo parizvino kuitisa miedzo kune yayo yemumuromo insulin capsule yekurapa Type-2 chirwere cheshuga. Mishonga yese yazvino yeCOVID-19 inorapwa kuburikidza nemajekiseni kamwe chete kana maviri.
Sekureva kwaOramed CEO Nadav Kidron, kuyedzwa kwepiritsi rekudzivirira reCOVID-19 kunotarisirwa kutanga mwedzi unouya, kana yawana mvumo yekupedzisira kubva kuHutano Ministry.
Kidron akawedzera kuti piritsi racho rinogona kushandiswa sekukurudzira kurwisa kusiana kwakanyanya kweDelta.
"Mushonga wedu wekudzivirira muromo, uyo usingavimbe nechero chando-chakasiyana nemimwe majekiseni ecoronavirus, zvinogona kureva mutsauko uripakati penyika iri kukwanisa kubuda mudenda kana kwete," akadaro Kidron.